मधेशी मोर्चाका कारण आन्दोलन सफल भएको बुद्धिजिवीहरुको दावी | सहारा टाइम्स
Home » samaj » मधेशी मोर्चाका कारण आन्दोलन सफल भएको बुद्धिजिवीहरुको दावी
मधेशी मोर्चाका कारण आन्दोलन सफल भएको बुद्धिजिवीहरुको दावी
काठमाडौ फागुन ८ गते । मधेसी मोर्चाका शिर्ष नेताहरुका कारण मधेस आन्दोलन अधिकार प्राप्त नगरी समाप्त भएको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौँको संवाद डबलीमा मधेसी जनता पार्टीको बुद्धिजीबि विभागले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनले मधेसीको अधिकार सुनिश्चितता, सम्भावना र विकल्प’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सो कुरा बताए हुन् ।
पूर्वमन्त्री तथा नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश साहले तीन पार्टीले मधेसीसँग छलफल नै गरी संविधान संशोधन गरेकाले समस्या समाधन नहुने बताए ।
‘शासक आन्दोलनकारीलाई अधिकार दिने भन्दापनि फुटाएर असफल बनाउन लाग्छ अहिलेपनि फुटाएर आन्दोलन असफल बनाइएको छ’ साहले भने । उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रले पाएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै सबैले एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अध्यक्ष साहले बताए ।
कार्यक्रममा मधेसी जनता पार्टीका अध्यक्ष महेश साह कलवारले मधेसी जनताको अधिकार सुनिश्चित नगरेकाले पुर्नलेखन नभएसम्म संविधान नमान्न नसकिने बताए ।
उनले जनताका छोराछोरीलाई सहीद बनाएर मन्त्री बन्ने स्वार्थी मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताका आन्दोलन असफल भएको बताए । ‘मधेसी मोर्चाका नेता र प्रधानमन्त्री ओलीबीच दुई जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु सहमति भएपछि आन्दोलनलाई तुवाइयो’ कलवारले भने ।
उनले मधेसी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउँदै अधिकारको लागि लडिरहेका सबैसँग मोर्चा बनाउनु पर्ने बताए । ‘भारतसँग रोटी र बेटीको सम्बन्ध भन्छन् तर म मान्दैन, भारत मधेसीको अधिकारभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हामीसँग नजिक हुन्छ र पूरा भएपछि जान्छ’ साहले भने ।
कार्यक्रममा डा. रामेश्वर सिंहले विखण्डनबाट मधेसको विकास नहँुने बताउँदै मधेसी विखण्डनको पक्षमा नरहेको बताए ।
कालोबजारीयालाई फाइदा पुग्ने गरी भारतले गरेको नाकाबन्दीले सबैभन्दा बढि मार मधेसीलाई परेको सिंहले विचार व्यक्त गरे । उनले अधिकार नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्नु पर्ने बताए । प्रा.डा. निरन्जन झाले संविधान संशोधन हात्तिको देखाउँने दात मात्र भएको भन्दै मधेसको समस्या समाधान नभएको बताए ।
त्यस्तै मोहमद अलीले मधेसी जनता नेपाली नागरिक भएपनि मधेसमा आगो लाग्दा र मानिस मर्दा समेत काठमाडौँले कुनै मतलब नराखेको बताए ।
सोही कार्यक्रममा मधेसी बुद्धिजीवि ओलोक तिवारीले मधेसलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा खोट भएकाले समस्या समाधान हुँन नसकेको बताए ।
मधेसी युथ थिङ्कका अध्यक्ष डा.विनय पञ्जियारले मधेसी मोर्चाको स्वार्थ पूरा गर्ने भनेपछि मधेस आन्लोलन असफल भएको बताए । उनले मधेसी युवाहरुले अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए ।
प्रा.आर ए यादवले अधिकार पाप्तिको लागि भन्दै मधेसी जनताले गोली खाने तर अधिकार नपाउँने विगत अहिलेपनि दोहरिएको बताउँदै मधेसी युवाहरुले अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए ।
अभिवक्ता रोसन झाले मधेसी मोर्चाले मधेसी जनतालाई धोका दिएको भन्दै नयाँ शक्ति नआएसम्म मधेसीको अधिकार सुनिश्चित नहुने दावी गरे ।
मधेसी जनता पार्टीको बुद्धिजीवि विभागको संयोजक सियाराम साहले पटकपटक असफल भएको मधेस आन्दोलनको आफूहरुले नेतृत्व गर्ने बताए ।